दुखद खबर :चितवनका विशाल सेढाइ र धादिङका रोशन छत्कुल्लीको अष्ट्रेलियामा मृ’त्यु ! « Online Tv Nepal
दुखद खबर :चितवनका विशाल सेढाइ र धादिङका रोशन छत्कुल्लीको अष्ट्रेलियामा मृ’त्यु !
Published : 20 March, 2020 10:57 pm
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा शुक्रबार दुई नेपाली युवाको मृ’त्यु भएको छ । क्याम्पिंगका लागि स्थानीय बरोअरा नेशनल पार्कमा शुक्रबार राति ७ः३० बजे आ’पतकालीन सेवालाई बोलाइएको थियो । तत्कालै घ’टनास्थलमा पुगेका उद्धारकर्मीले एक जना व्यक्तिलाई सास फेर्न अप्ठेरो भएको अवस्थामा उ’द्धार गरी हेलिकोप्टर मार्फत अस्पताल लगेका थिए ।
उ’द्धार गरिएका व्यक्ति प्रदिप पाण्डे भएको बताइएको छ ।अर्कोतर्फ, हराईरहेका दुईजनाको खोजी जारी राखेका उ’द्धारकर्मीले राति ११ः३० बजे मात्र उनीहरुको श’व भेट्न सफल भएका थिए ।दिउँसोदेखि नै क्याम्पिंगमा गएका उनीहरु साँझ परेपछि पानीमा पौ’डीका लागि छिरेका थिए । त्यसपछि द’लदलमा भा’सिएका कारण उनीहरु माथि आउन सकेनन् ।
प्रहरीले दुईजनाको श’व पो’ष्टमार्टमका लागि पठाएको छ । मृ’तकका एक आफन्तले दिएको जानकारी अनुसार मृ’त्यु हुनेमा विशाल सेढाई र रोशन छत्कुली छन् । उनीहरु क्रमशः २६ र २३ वर्ष उमेरका थिए । सेढाई पेशाले ईन्जिनियर हुन् । अष्ट्रेलियाको पढाई सकाएर एक वर्षदेखि उनी आफ्नो पेशामा कार्यरत थिए ।
चितवनको माडी नगरपालिका-६ स्याउलीबासमा छोराको खुर्पा प्रहारबाट आमाको मृत्यु भएको छ । स्याउलीबास निवासी अन्दाजी
कर्मचारीलाई कुटेर कार लुट्ने ३ जना पक्राउ
डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकाका कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेर लुटपाट गर्ने तीनै जना पक्राउ परेका छन्। कैलालीको गोदावरी
सुनारको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रेमी सूर्य श्रेष्ठलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
लोक दोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रेमी सूर्य श्रेष्ठलाई ५ दिन
नेपालमा बड्न थाल्यो कोरोना संक्रमितको संख्या
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ४१ जनामा कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस) को सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा
सुनारको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रेमी सूर्य श्रेष्ठलाई
सोमबार भगवान शिवको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुस